Cisco Antananarivo-Renivohitra, Atsimondrano… : mbola tsy hianatra ny mpianatra hatramin’ny 5 novambra izao | NewsMada
Cisco Antananarivo-Renivohitra, Atsimondrano… : mbola tsy hianatra ny mpianatra hatramin’ny 5 novambra izao
Hapetraka ny komitin’ny fanaraha-maso isaky ny sekoly, mbola mitsahatra ny fampianarana amin’ny Cisco 25 hatramin’ny alahady 5 novambra, ka anisany ny eto Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano…. Izay ny fanapahan-kevitry ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, omaly. Voakasika daholo ny sekoly rehetra na miankina na tsia amin’ireo Zap sy Cisco ireo.
Mitohy ny fialan-tsasatra ho an’ny mpianatra amin’ny Cisco sivy: Antananarivo Renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo, Toamaina I, Fenoarivo Atsinanana, Vavatenina, Mahajanga I ary Fianarantsoa. Voakasika avokoa ny Zap rehetra ao amin’ireo Cisco ireo. Iantefan’ny tsy fisokafan’ny sekoly ihany koa ny Zap 24: Anjozorobe sy Mangamila ao amin’ny Cisco Anjozorobe. Zap Sabotsy Ambohitromby, Cisco Andramasina, Zap Ambanivohitra Toamasina ao amin’ny Cisco Toamasina II, Zap Antoby Atsinanana, Zap Mahaditra, Zap Betafo Ville…. Zap Antsatramarina, Cisco Mandritsara. “Mikatona avokoa ny sekoly amin’ireo Zap sy Cisco ireo na sekolim-panjakana na sekoly tsy miankina hatramin’ny 5 novambra ho avy izao. Fepetra noraisin’ny tomponandraikitry ny fanabeazana izao ho fitsinjovana ny fahasalaman’ny mpianatra”, hoy ny tale jeneralin’ny Fanabeazana fototra, Andriamampandry Todisoa, omaly teny Anosy. Nohavaozina ny fifanarahana amin’ny mpiray ombon’antoka hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena rehefa misy ny trangana pesta. Miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Fanabeazana ny Unicef sy ny OMS. Hofanina eto Antananarivo manomboka amin’ny herinandro ambony ny tomponandraikitry ny fahasalamana any an-tsekoly ho an’ny Dren 22 miaraka amin’ny Unicef sy OMS. Hampahafantarina ireo mpiofana ny fepetra manokana vaovao momba ny pesta sy ny fandraisana an-tanana ireo rehetra eo anivon’ny sekoly miaraka amin’ny torolalana arahana alohan’ny hisokafan’ny sekoly indray.
Hapetraka isaky ny sekoly ny komitin’ny fanaraha-maso
“Hapetraka isaky ny sekolim-panjakana na tsy miankina ny komitin’ny fanaraha-maso ahitana ny tale, ray aman-dreny, ny mpanabe ary tokony hisy mpitsabo ihany koa”, hoy ny filohan’ny fikambanana misahana ny ivontoeram-panabeazana laika (AILE), Rakotomalala Célin. “Izahay mihitsy no nangataka ny fametrahana ny komity satria efa nangataka ny hiverina an-dakilasy izahay”, hoy ny fanazavany ihany. Asiana efitrano fanokanana ny ankizy na mpanabe ahina ho voan’ny pesta. “Hanome fitaovana ahafahana mitily ny hafanana sy ampiasain’ny komity ny Unicef. Hatoro azy ireo koa ny fepetra raisina raha miseho ny tranga pesta any an-dakilasy. Hanombohana ny fiofanana ireo Zap sy Cisco mbola ahitana tranga pesta amin’izao fotoana izao. Tanjona ny hifehezan’ny komitin’ny fanaraha-maso ny fepetra rehefa hiverina ny fampianarana”, hoy ny tomponandraikitry ny Unicef, Sophie Achilleas.
Tokony hisy fifampitsinjovana momba ny saram-pianarana
Nanamarika ny filohan’ny AILE fa tokony tsy hisy ny fanararaotana eo amin’ny talen-tsekoly momba ny saram-pianarana volana oktobra. Mampiasa olona koa anefa ny sekoly ka ilaina ny fifampitsinjovana eo amin’ny ray aman-dreny sy ny mpitantana ny ivontoeram-pianarana tsy miankina. Manomboka izao, hanentana ny sekoly tsy miankina ny AILE hametraka ny komitin’ny fanaraha-maso hatramin’ny 5 novambra satria handray fampianarana ny 6 novambra.
Tsy misy fampianarana koa amin’ny oniversite voakasika
Nanome toromarika ho an’ny mpitantana ny oniversitem-panjakana sy ireo ivontoeram-pampianarana ambony ny minisitera hampiato ny fampianarana hitandroana ny fahasalaman’ny mpianatra sy ny mpampianatra, araka ny fanambarana nosoniavin’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony, Ralijaona Guy, omaly. Voakasika manokana ireo toerana mbola ahitana ny valanaretina pesta.